Dowlada britian iyo Sucuudiga oo ka wada hadllay Xaalada Dalka Soomaaliya – SBC
Dowlada britian iyo Sucuudiga oo ka wada hadllay Xaalada Dalka Soomaaliya
Raiisul wasaaraha Britian David Cameron oo booqoshao hal maalin a ku tagay wadanka Sucuudiga ayaa halkaas kulan kula qaatay boqorka dalkaasi Boqor Cabdalla oo uu kala hadlay xaalado ay ka mid tahay xaalada Dalka Soomaaliya.
Raiisul wasaaraha Ingiriiska ayaa waxaa uu boqorka ugu horeyn kala hadlay xiriirka labada dal kadibna waxaa uu raiisul wasaaraha ka hadlay Khatarka ka soo fool leh dalka soomaaliya Sida burcad badeeda,Argagaxisada Iyo arimo ay ka mid yihiin dagaalada aan dhamaadka lahayn ee ka socda Dalka Soomaaliya.
Mr Cemoron ayaa Boqorka Sucuudiga u sheegay In dowlada Britain ay qabaneyso Bisha Soo socota ee Sannadkan ay qabanayaan shirk u saabsan Xaalada Dalka Soomaaliya gar ahaan wax ka qabashada Arimaha Burcad badeeda iyo Khatarta ka imaan karta Islaamiyiinta Mayalka adag ee Soomaaliya.
Raiisul wasaaraha Iyo Boqorka ayaa isla qiray in ay muhiim tahay in la iska kaashado sidii wax looga qaban lahaa xasilinta Dalka Soomaaliya gaar ahaan wax ka qabashada Dagaalada Hubeysan iyo Kooxaha Burcad badeeda Soomaalida ee qafaalanaya gadiidka caalamka u kala socodaalaya.
Boqorka Dalka sacuudiga ayaa sheegay in uu taageersan yahay wax ka qabashada Arimaha Soomaaliya gar ahaan in caalamka oo dhan uu u guntado sidii Xasilooni iyo kala danbeyn loogu soo dabaali lahaa.
Kulanka labada Dowladooda ee Arimaha soomalaiya lagu soo qaaday waxaa uu qeyb ka yahay xiriirka dowladaha Britian iyo Sucuudiga ka dhaxeeya gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo Qandaraasyada Labadaasi wadan ka dhaxeeya.
Faysal C/laahi Maxamed